Testosterone cypionate raw: ị kwesịrị ịma banyere steroid! | AASraw
Testosterone cypionate raw ntụ ntụ: Ihe niile ị kwesịrị ịma banyere ịtụnanya steroid !!!
/blog/Trenbolone , Trenbolone Acetate/Testosterone cypionate raw ntụ ntụ: Ihe niile ị kwesịrị ịma banyere ịtụnanya steroid !!!
Ihe na 02 / 15 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Trenbolone, Trenbolone Acetate.
Testosterone cypionate raw powder: Ihe niile ị kwesịrị ịmara banyere steroid dị ịtụnanya!
1.What bụ Testosterone cypionate? / Testosterone cypionate overview 2.History nke Testosterone Cypionate
3.What bụ Testosterone cypionate raw ntụ ntụ? 4.What ụdị (s) ka Testosterone cypionate ntụ ntụ na-abata?
5.How ka Testosterone cypionate na-arụ? 6.Potential uru nke Testosterone Cypionate
7.How kwesịrị m iji Testosterone Cypionate? Testosterone Acetate ka m kwesịrị inject? 8.Testosterone Cypionate dose maka EDTestosterone Cypionate dose maka ED
9.Testosterone Cypionate dose maka bodybuilding 10.Femal
e Testosterone Cypionate Dosage
11.How ka esi eme Testosterone ọgwụ Cypionate si Testosterone Cypionate raw ntụ ntụ?
Testosterone Cypionate raw ntụ ntụ video
|.testosterone Cypionate isi Ihe:
aha: testosterone Cypionate
Ọbara arọ: 412.6
agba: White ma ọ bụ na-acha ọcha Crystal ntụ ntụ
Gịnị bụ Testosterone cypionate? / Testosterone cypionate nnyocha
Testosterone Cypionate bụ otu n'ime ọtụtụ ụdị dị iche iche nke Testosterone dịnụ, na-abụkarị bodybuilding na na-emeso ED, ndị ọzọ dị ka Testosterone acetate,Testosterone decanoate, Testosterone enanthate, Testosterone phenylpropionate, Testosterone isocaproate,Testosterone propionate,testosterone Sustanon 250, bụ akụkụ nile nke ihe dị iche iche nke Testosterone.
Testosterone Cypionate bụ yikarịrị nke abụọ dị iche iche a na-ahụkarị (nke mbụ bụ testosterone Enanthate). Ọ bụ ụdị injectable nke Testosterone na nkwụsị dị ntakịrị nke ntọhapụ na ogologo ndụ. Otú ọ dị, mkpụrụ ndụ na ntọala nke abụọ nke Testosterone Cypionate na Testosterone Enanthate dị nnọọ iche na ogige abụọ ahụ dị mfe nghọta (dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ịga ọsọ ọsọ nke 10 nke Testosterone ma gbanwee n'etiti Testosterone Enanthate na Testosterone Cypionate seamlessly). Testosterone Cypionate nwere ọkara ndụ nke ihe dị ka 12 ụbọchị mgbe Testosterone Enanthate nwere ọkara ndụ nke ihe dị ka ụbọchị 10 - ọ dị nnọọ iche. Eziokwu na-adọrọ adọrọ banyere Testosterone Cypionate bụ, ọ dị ka ọ nwere ihu ọma dị iche iche nke ewu ewu Ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na America n'elu Enanthate dị iche iche. Otú ndị a dị iche iche adịghị njọ, Otú ọ dị, ọdịdị dị iche iche nke ojiji na nnweta nke abụọ dị iche iche dị ka Testosterone Enanthate dịka ya na ọ dị ntakịrị karịa. Enweghị mgbanwe dị iche iche nwere uru ọ bụla karịa nke ọzọ.
Akụkọ banyere Testosterone Cypionate
Testosterone Cypionate bụ nke mbụ e kere n'etiti MidNNXXs, a tọhapụrụ ya na ahịa ọgwụ na-ede ọgwụ aha Depo-Testosterone ma nke UpJohn mere (ma, aha ya dị na Depo-Testosterone cyclopentylpropionate ma e mepụtara ka ọ pụta ìhè ihe kpatara ya). N'adịghị ka Testosterone Enanthate, nke a maara nke ọma dị ka ihe mba ụwa, Testosterone Cypionate maara na US ga-aza Eanthate dị iche iche (ọ bụ ezie na Testosterone Enanthate na-etinye ya n'ọrụ dị ka otu na United States). Testosterone Cypionate emeela ihe ndekọ dị mma dị otú ahụ na ọ bụ n'ezie na Production nke Upjohn (onye jikọtara ya na Pfizer na 1950) taa. Dịka Testosterone Cypionate bụ mmeghachi omume nke American na ngwaahịa Testosterone Enanthate, ọtụtụ ndị America na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na 2009s, 1960s, na 70s na-ahọrọ iji Testosterone Cypionate na Enanthate dị iche iche n'ihi enweghị ihe kpatara ya karịa nkwado nke ngwaahịa American, otutu ihe gbasara mpako (otu ugboro, na Cypionate na Enanthate dị iche iche nke Testosterone bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% dịka ya na ọ dịghị ezigbo ihe mere ị ga-eji chọọ otu onyinye karịa nke ọzọ).
Testosterone bụ isi etrogen kachasị na ahụ. Endogenous testosterone na-agwakọta site na mkpụrụ ndụ n'ime testis, ovary, na adrenal cortex. N'iji ọgwụgwọ eme ihe, a na-eji testosterone mee ihe na njikwa nke hypogonadism, ma ọ bụ nke nwere mmerụ ma ọ bụ nweta. Testosterone bụkwa ihe dị mma na-etolite etrogen nke kachasị dị irè maka ọgwụgwọ ọgwụ nke carcinoma nke ara na ụmụ nwanyị postmenopausal. A na-eji Testosterone eme ihe na 1938 ma kwadoro FDA na 1939. A na-eji ụbụrụ anabolic, ihe mgbaàmà nke testosterone, n'ụzọ na-ezighị ezi ma na-achịzi bekee ugbu a. testosterone, dị ka ọtụtụ anabolic steroid, bụ nkewa dịka ihe a na-achịkwa na 1991. A na-emezi Testosterone parenterally na oge na-egbu oge-ntọhapụ (ebido) ụdị ụdị ọgwụgwọ. Na September 1995, FDA kwadoro testosterone transdermal patches (Androderm); ọtụtụ ụdị na transdermal na ụdị ndị dị ugbu a gụnyere implants, gels, na ngwọta ngwọta. Usoro ụbụrụ testosterone, Striant, bụ FDA kwadoro na July 2003; usoro ahụ bụ ngwaahịa mucoadhesive nke na-adọrọ na mucosa buccal ma na-enye ịhapụ testosterone nke a na-achịkwa. Na May 2014, FDA kwadoro ịmalite ịnweta gel (Natesto). A na-enyocha ihe mgbochi transdermal (Intrinsa) maka ọgwụ mgbochi nke nwanyi. usoro ojiji a na-eji eme ihe kwa ụbọchị na-eme nke ọma karịa ụmụ nwanyị. FDA chịrị n'oge 2004 na ọ ga-egbu oge nkwenye nke ụmụ nwanyị Intrinsa na-achọ ịchọta ihe gbasara nchebe, karịsịa n'ihe gbasara ọrịa obi na obi.
Gịnị bụ Testosterone cypionate raw ntụ ntụ?
Testosterone cypionate raw, ihe ndị dị na ọgwụ Testosterone cypionate, bụ ụdị ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha Crystal ntụ ntụ, odorless ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enwere anụ ọkụ. A naghị edozi ya na mmiri, a naghị edozi ya na mmanya, chloroform, dioxane, ether, na soluble na mmanu nri. Dika ntinye ihe ndi ozo na-azuta akwa di elu na Testosterone cypionate raw powder.
Detail nke Testosterone cypionate raw ntụ ntụ dị ka n'okpuru:
Ụdị Mkpụrụkpụ: C27H40O3
Molekụla arọ: 412.6
Nchekwa Temp .: 2-8ºC
Agba: ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha Crystal ntụ ntụ
Kedu ụdị (s) nke Testosterone cypionate raw ntụ ntụ na-abata?
Testosterone Cypionate raw powder is commonly used as oil injected oil, na-erekwa n'ụdị injection.In ahịa, e nwere 200mg / ml, 250mg / ml, 300mg / ml, ụfọdụ UGL mere ọbụna 350mg / ml na 400mg / ml.
Kedu ka Testosterone cypionate si arụ ọrụ?
Testosterone cypionate bụ Testosterone, bụ klas nke ọgwụ a na-akpọ androgens (ụmụ hormones). A na - eji ọgwụ a dochie anya testosterone n'ime ndị ikom nwere ọnọdụ nke ụbụrụ testosterone dị ala, dịka nrụrụ na-erectile (ihe isi ike na-eweta ma ọ bụ na-echekwa ụlọ). E nwere ihe ndị ọzọ nwere ike isi kpatara nrụrụ erectile, n'ihi ya, a na-eji testosterone emeso nrụrụ erectile nke kpatara testosterone dị ala.
Testosterone cypionate na-arụ ọrụ site na dochie testosterone na ahụ anaghị efu. A ghaghị iji cypionate Testosterone naanị ma ọ bụrụ na nkwenye testosterone gosipụtara site na mgbaàmà na nyocha ọbara.
Endogenous testosterone bụ maka mmekọahụ na oge ọ bụla nke mmepe n'oge ndụ. N'ikwu okwu, a kwadebere ya na cholesterol. Ọrụ nke androgens na mmepe nwoke na-amalite n'ime nwa ebu n'afọ, dị oké mkpa mgbe ọ bụ nwata, ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị mkpa na nwoke tozuru etozu. Ụmụ nwanyị na-echekwa obere testosterone si ovaries. Nchịkọta nke androgens sitere na cortex adrenal adịghị ezu iji nọgide na-enwe mmekọahụ.
Nkọwapụ plasma na-emewanye ka ọ ghara igbochi gonadotropin-na-atọhapụ hormone (ibelata testosterone na-adịgide adịgide), hormone na-agụnye ọgwụ, na hormone na-akpali akpali site na usoro nzaghachi na-ezighị ezi. Testosterone na-emetụta nhazi nke erythropoietin, nguzozi nke calcium, na ọbara glucose. Androgens nwere nnukwu ihe na-eme ka ọ dị arọ, na-enyere ha aka ịbanye na mkpụrụ ndụ nke anụ ahụ a na-atụ anya ngwa ngwa. N'ime mkpụrụ ndụ ahụ, testosterone na-enweta mgbanwe nke enzymatic gaa na 5-alpha-dihydrotestosterone ma na-emepụta mgbagwoju anya na ndị na-anabata ndị na-eto eto. Ihe omume nke etiti na-esite na nbido nke transcript na mgbanwe cellular na ngwongwo nke steroid-receptor complex.
N'ikpeazụ, etrogens na-akpali RNA polymerase, na-ebute mmepụta protein dị ụba. Ndị na-edozi ndị a bụ ọrụ maka mmekorita nwoke na nwanyị, gụnyere uto na maturation nke prostate, vesicle vesicle, penis, na scrotum. Mgbe ọ na-etolite, androgens na-eme ka mmụba na mberede na-eto eto na mmepe nke ahụ ike, site na nhazi ụda ahụ. Mgbanwe na-ewerekwa ọnọdụ na larynx na ụda olu, na-eme ka olu ahụ dịkwuo elu. A na-agwụcha akwụkwọ na ntutu nke ntutu isi. Achịkwa nke epiphyses na nkwụsị nke uto na-achịkwa ndị androgens, dịka nhazi nke spermatogenesis. Mgbe etrogens na-enweghị atụ, ojiji nke androgens na-eme ihe dị mkpa maka mmepe nwoke na mmepe.
Nkà ọgwụ na-eme:
A na-enye Testosterone intramuscularly (IM), ka akpụkpọ ahụ dị ka gel top, ngwọta, mmanụ mmanu ma ọ bụ usoro transdermal maka absorption absorption, site na ịmepụta pellets ogologo, ma ọ bụ site na usoro buccal.
Testosterone na-elekọta intramuscularly (IM); site na nkedo subcutaneous; ka akpụkpọ ahụ dị ka gel top, ngwọta, mmanụ mmanu ma ọ bụ usoro transdermal maka absorption absordermal; site n'inwe pellets ogologo oge, ma ọ bụ; site na usoro buccal.
Na ọgwụ, testosterone bụ protein. Ọ nwere nnukwu mmekọrịta dị mma maka hormone na-ejikọta globulin (SHBG) na obere ala maka albumin. Ngalaba albumin-kpam kpam dissociates. Ebumnobi nke SHBG gbanwere n'oge ndụ. Ọ dị elu n'oge ọ na-aga n'ihu, na-ada mbà n'oge uto na ndụ okenye, mgbe ahụ na-ebili ọzọ na nká. DHT metabolite na-arụsi ọrụ ike nwere njikọ ka ukwuu maka SHBG karịa testosterone. Mwepụ nke ọkara ndụ bụ 10-100 nkeji ma dabere na ọnụ ọgụgụ nke testosterone n'efu na plasma.
Testosterone na-etinye aka na imeju na ụdị 17-keto steroid. Ọ bụ mkpụrụ maka nje P450 (CYP) XPNNXA3 na isoenzyme.4 Estradiol na dihydrotestosterone (DHT) bụ ndị isi na-arụ ọrụ metabolites, DHT na-amalitekwa inwe metabolism. Ihe omuma Testosterone yiri ka ọ dabere na e guzobere DHT, nke na-ejikọta ndị proteins protein receptor. Mmekọrịta nke DHT ọzọ na-ewere ọnọdụ n'ime anụ mmepụta. Banyere 1% nke ọgwụ intramuscular testosterone na-apụ na urine dị ka conjugates nke glucuronic na sulfuric acid. Banyere 90% na-ezipụ na feces, n'ụzọ dị iche iche na-akwadoghị. E nwere mgbanwe dị ukwuu n'ọkara ndụ testosterone dịka a kọrọ na akwụkwọ ndị ahụ, site na 6 ruo 10 minit.100
P450 isoenzymes cytochrome na ndị na-ebute ọgwụ ọjọọ: CYP3A4, P-gp.
Testosterone bụ mkpụrụ maka CYP3A4 ma na-ebute ma ọ bụ onye na-emechi P-glycoprotein (P-gp).
Enwere ike uru nke Testosterone Cypionate
Ebumnuche nke Testosterone Cypionate injections bụ iji nye aka ịhazi oke mmanu hormone iji nyere nsogbu nsogbu metụtara obere T. N'ihi na ndị nwere obere T ma ọ bụ maka Testosterone Cypionate bodybuilding, uru nke Testosterone Cypionate injections nwere ike ịgụnye:
ịba ụba nke inwe mmekọahụ
mma mgbaàmà nke ED
Nọgide na-enwe ike na mma
Nọgide na-enwe ọkpụkpụ na ike
Nọgide na-enwe libido na mmepụta
Na-enye ume na ime ka ahụike gị dịkwuo mma
Kedu ka m ga - esi jiri Testosterone Cypionate?
Testosterone Cypionate doses dị nnọọ mgbanwe n'ihe gbasara ihe mgbaru ọsọ onye ọrụ na ajụjụ. Testosterone Cypionate doses nwere ike ịkwado ya na ihe ọ bụla nwere ike ime - ịcha, ịghasị, ịdabere na uka cycles niile yiri. Ngbanwe dị n'etiti Testosterone Cypionate doses dabere na ihe mgbaru ọsọ nke onye ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, a na-achọrọkarị ndị na-achọ ka ha bulie elu ma ọ bụ gbakwunye ụda. Maka ebumnuche nke ịcha na abụba abụba, ọ bụghị ihe a chọrọ ka ịchọta oke dị elu na ụda mkpụrụ ndụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na nchegbu kachasị mkpa mgbe itinye aka na abụba bụ ịchekwa ike muscle n'oge caloric deficit nke nhụsịrị ụzụ bụ ihe ize ndụ na-enweghị ụbụrụ anabolic. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọkpụkpụ azụ bụ ihe niile dị mkpa.
Testosterone Cypionate dose maka ED
N'ime usoro ọgwụgwọ, ụkpụrụ nduzi maka Testosterone Cypionate doses maka ebumnuche nke nwoke na-eto eto na androgen deficit (hypogonadism and topapause) kpebisiri ike ịbụ 50 - 400mg na-elekọta otu ugboro na 2 - 4 izu. Ụdị kpọmkwem ga-adabere na onye ọ bụla na ajụjụ,
Testosterone Cypionate doses gụnyere nke Testosterone Replacement Therpay (TRT) doses. Nke a dị mkpa na cycles ebe onye ọ bụla chọrọ iji dọtịnụ anabolic steroid na Testosterone Cypionate ma nwee steroid ahụ anabolic na-eme ka ụbụrụ na-emepụta ahụ mgbe Testosterone Cypionate na-akwado ọrụ nke nanị ịnọgide na-enwe usoro physiological nkịtị nke Testosterone. A na-ewere dose nke 100mg kwa izu nke Testosterone Cypionate dị oke dose TRT. Onye ọ bụla dị elu na onye ọrụ ahụ malitere ịme ihe ize ndụ nke aromatization ka ukwuu site na supraphysiological Testosterone Cypionate doses.
Testosterone Cypionate dose maka bodybuilding
Isi arụmọrụ Testosterone Cypionate Doses:
Maka ebumnuche nke mmelite mmezi, ntọala Testosterone Cypionate bodybuilding doses ga-ada na 400-500mg kwa izu. N'ezie, maka ọtụtụ ndị ikom, nke a bụ ihe ha ga-achọ ọbụna ma ọ bụrụ na ha emeela site na iji steroid anabolic ruo ọtụtụ afọ. Testosterone Cypionate doses of this range are well-tolerated by ndị kasị mma okenye ndị ikom na ga-arụ ọrụ nke ọma mgbe niile mgbe okirikiri okirikiri. Ọ bụrụ na ọ dịtụbeghị mgbe ị na-agba ọsọ n'ihu, nke a bụ ebe ịchọrọ ịmalite dịka ọ ga-enyere gị aka ikpebi nzaghachi gị.
Elu Testosterone Cypionate Ihe:
Higto Testosterone Cypionate bodybuilding doses above the base performance level are not unusual. Ị ga-ahụ ọtụtụ ndị ikom na-agbakwụnye na 600-1,000mg kwa izu. Imirikiti mmadụ ga-ahụ ebe 600mg ga-adị nnọọ mfe, ma dị ka dose ahụ na-abawanye karịa nke a, enwere ike inwe mmetụta ndị na-akpata ga-abawanye ụba. Mgbe Testosterone Cypionate doses karịrị 1,000mg kwa izu akara nke a ga-amụba n'ụzọ dị ịrịba ama omume. Maka nkezi mgbatị mgbatị, usoro ọgwụ Testosterone Cypionate agaghị adị mkpa ịhapụ 400-600mg kwa izu. Maka ndị na-ebi ndụ ndụ siri ike karị, dịka onye na-eme egwuregwu asọmpi ma ọ bụ onye na-ebi ụdị ndụ ahụ, usoro ya ga-eru ọkwa dị elu karị. Ụdị dị otú ahụ nwere ike ịgba ọsọ n'enweghị nsogbu kama ọ ga-etinye mgbalị siri ike na agụmakwụkwọ; a dọrọ aka ná ntị.
Bodybuilding Testosterone cypionate bụ ogologo oge, otu ester testosterone ngwaahịa. Ọ nwere ogologo 8 carbons, ma na echekwa ya nke ukwuu n'ime anụ ahụ na-adọrọ adọrọ mgbe a na-etinye ya n'ime intra-muscularly. Ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-ahapụ ya mgbe ọ gbanyechara ya. Ọnụ ọgụgụ ọbara nke elekere 24-48 dị elu nke ọbara cypionate mgbe awa gasịchara ma jiri nwayọọ nwayọọ daa. Ọbara na-ebute ebe 12 na-anọchi anya mgbe ọ gwakịrị ya ma nọrọ ebe ahụ ruo ihe karịrị izu atọ. A na-ajụkarị Cypionate otu ugboro n'izu, nke na-eme ka ụbụrụ kachasị elu karịa ọkara nke kachasị elu n'oge ọ bụla. Onye ọ bụla testosterone, dị ka eze nke ndị na-ewu mgbidi, na-efu ihe dị irè ma dị mkpa maka ihe ọ bụla steroid stack. Eji ya mee ihe, onye ọrụ ahụ nwere ike ịtụ anya ịhụ uru ndị dị mkpa. Ọdịdị nke cypionate na-eme ogologo oge na-enye onye ọrụ ohere ịdịlata ugboro ugboro mgbe ọ na-ejide ọbara. Otu testosterone ester na-eme ogologo oge ga-enye aka maka mkpa gị, na cypionate bụ ngwaahịa nke dị mfe karịa ụfọdụ n'ime steroid ndị ọzọ si n'ebe ahụ. Ọ bụghị ikwu na ọ bụ enweghị òkè nke nsogbu, ma ọ bụ nhọrọ dị mma, karịsịa maka ndị ọhụrụ ahụ ka ha nwee ike ịmepụta ahụ. Ịdigharị ngwaahịa ahụ abụghị nhọrọ na mmetụta ndị nwere mmetụta na-emetụta, n'ihi na ọ ga-anọgide na-eme ka mmetụta ndị a dịkwuo ogologo oge ruo ogologo oge site na ogologo oge nke steroid a. Ụdị ọgwụ ochie dị ka nolvadex, proviron, clomid na HCG nwere ike inye aka, ma n'oge usoro okirikiri na mgbapụta iji nyere aka weghachi mmepụta nke testosterone. Testosterone cypionate na-eme ka ọ dị ntakịrị karịa sustanon, ma mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe, onye kwesịrị ịmara ọgwụ estrogens dị ka nolvadex ma ọ bụ clomid ma jiri otu n'ime ha mgbe mgbaàmà nke gyno mere.
Nwa nwanyi Testosterone Cypionate Dosage
N'iji Testosterone Cypionate n'etiti ndị nwanyi na-emepụta steroid bụ nwanyi bụ ihe a na-ahụkarị n'ihi eziokwu bụ na nke a bụ ụlọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. Ya mere, Testosterone Cypionate adịghị atụ aro ka e jiri nwanyị mee ihe na enweghi obere data na arụ ọrụ dosing na onyinye a.
Kedu ihe m kwesịrị ịma tupu ewere Testosterone Cypionate?
A naghị ekwe gị iji Testosterone Cypionate ma ọ bụrụ:
Ị nwere ihe na-efe efe na testosterone ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke testosterone cypionate injection.
ịṅụ ọgwụ ọ bụla dịka nke a, ọgwụ ọjọọ ọ bụla, ihe oriri, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị gị n'ahụ. Gwa onye dọkịta gị banyere ọrịa ahụ na ihe ịrịba ama ndị ị nwere, dị ka ọkụ ọkụ; ndokwa; nhazi; mkpụmkpụ nke ume; ntụgharị; ụkwara; ihu na ihu, egbugbere ọnụ, ire, ma ọ bụ akpịrị; ma ọ bụ ihe ịrịba ama ọ bụla ọzọ.
ị bụ nwoke ma nwee ara ara ma ọ bụ ọrịa prostate.
ị nwere nsogbu ahụike ndị a: ọrịa obi, akụrụ akụrụ, ma ọ bụ ọrịa imeju.
ị bụ nwanyi. A naghị akwado ọgwụ a maka iji nwanyi mee ihe.
Nke a abụghị ndepụta zuru oke nke ihe niile ịchọrọ ịchọta banyere Testosterone Cypionate.
Kedu ihe m ga-ama mgbe m na-ewere Testosterone Cypionate raw ntụ ntụ?
Enwere ụfọdụ ọgwụ, nke dị mfe iji ya na, biko anaghị eji ngwaahịa ndị a mgbe ị na-ewere Testosterone Cypionate raw ntụ ntụ:
ọgwụ maka ọrịa shuga
ọgwụ ndị na-agwọ ma ọ bụ gbochie mkpịsị ọbara dị ka aghafarin
ọgwụ ndị dị ka prednisone ma ọ bụ cortisone
Kedu ihe m kwesịrị ịma mgbe m nwụchara Testosterone Cypionate?
Chekwaa ọgwụ a na 68 Celsius F ruo 77 Celsius F (20 Celsius C na 25 Celsius C) ma pụọ ​​na okpomọkụ, mmiri na ìhè.
Mee ka ọgwụ niile ghara iru ụmụaka.
Kpofuo ọgwụ ọ bụla a na-ejighi eji agwọ ọrịa mgbe ụbọchị njedebe ahụ gasịrị.
Ejila mmiri na-ejighị ya mee ihe ma ọ bụ wunye ala ma ọ bụ igbapu.
Ekerela onye o bula na ogwu a.
Ịre ma ọ bụ inyefe ọgwụ a dị ize ndụ ma megide iwu.
Testosterone Cypionate Cycles na Jiri
Jiri dose emezughị ka ị chee banyere ya.
Ọ bụrụ na ọ dị nso maka oge ị ga-agbaso, mee ka ụbụrụ a tụfuru ma laghachi azụ n'oge gị.
Ejila nyocha 2 ma ọ bụ ihe mmezi ọzọ.
Dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Testosterone dị iche iche ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ, Testosterone Cypionate cycles yiri ka ọ ga-ejikarị mee ihe maka nzube nke ịkụnye ihe, ịchọta ọtụtụ, na ike inweta oge ọzụzụ. Ọ bụ ezie na ọ dị mma maka iji mezuo ya, nke a apụtaghị na enweghi ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị irè (ọ bụ ezie na ọ bụ obere dose) maka imebi usoro ntụrụndụ ebe ọnwụ abụba bụ ihe mgbaru ọsọ bụ isi. Maka nzube nke ịgha mkpụrụ na / ma ọ bụ inweta uka na ike, Testosterone Cypionate na-arụkarị ọrụ n'ogo (dịka 500mg / izu). A na-ejikarị ya na usoro ọgwụgwọ a maka oge nke 12 - izu 14 n'ihi ogologo oge ya, ya mere, ọ dị ogologo ndụ. Testosterone Cypionate nwere ọkara ndụ gburugburu 10 - 12 ụbọchị. Site n'iji ya tụnyere ya, Testosterone Enanthate fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, na ọkara ndụ gburugburu 7 - 10 ụbọchị.
N'agbanyeghị ihe mgbaru ọsọ ahụ, ma ọ na-egbutu ma ọ bụ na-egbu egbu, Testosterone Cypionate na-ejikarị ma tinye ya na ndị ọzọ anabolic steroid nke nwere ụdị yiri nke ahụ maka ihe doro anya. Ọ bụ ihe jikọrọ ya na ogige ndị dịka Deca-Durabolin (Nandrolone Decanoate), nke na-emekarị maka 10 - 12 izu dị ka Testosterone Cypionate, na ụdị 'kickstarting' dị ka Dianabol (Methandrostenolone) na-esokarị na mmalite nke okirikiri ruo mgbe a kwụsịrị na izu 4 ma ọ bụ 6.
Olee ọgwụ ndị ọzọ nwere ike iji ọgwụ a mee ihe?
Enwere ike inwe mmekọrịta n'etiti testosterone cypionate na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a:
corticosteroids (dịka, hydrocortisone, prednisone, methylprednisolone)
ọgwụ ndị na-arịa ọrịa shuga (dịka, chlorpropamide, glipizide, glyburide, insulin, metformin, nateglinide, rosiglitazone)
Ọ bụrụ na ị na-ewere ụfọdụ n'ime ọgwụ ndị a, ọ ga-akara gị mma ka ị ghara ịnara Testosterone Cypionate, ma ọ bụ soro dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike gbanwee ọgwụ ọgwụ ahụ.
Ọgwụ ndị ọzọ dịka edere n'elu nwere ike iji ọgwụ a. Gwa onye dọkịta gị ma ọ bụ dee ihe niile edere ọgwụ, n'elu-na-counter (na-abụghị ọgwụ), na ọgwụ ndị ị na-aṅụ. Gwa ha ihe ọ bụla ị ga - eme. Ebe ọ bụ na caffeine, mmanya, nicotine siga, ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ n'okporo ámá nwere ike imetụta ihe ọtụtụ ọgwụ, ị kwesịrị ikwe ka onye na-ede akwụkwọ mara ma ị jiri ha.
Mmetụta Akụkụ nke Testosterone Cypionate
Dịka abụm nke kachasị mma maka ọtụtụ ndị ikom, mmetụta dị n'akụkụ Testosterone Cypionate dị n'ọtụtụ ụzọ mfe ịchịkwa. Mgbe a na - enweta mmeghachi omume ndị dị otú ahụ, buru n'uche na ha na - adaba n'ụzọ dị mfe ma bụrụ ndị a na - ejighị n'aka. Ọbụna nke ahụ, nchịkọta usoro, usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa na ọnọdụ ahụ ike gị dum ga-arụ ọrụ.
Maka mmetụta nke onwe ya, Testosterone Cypionate dị ka ogige testosterone niile na-eburu ọrụ aromatase; akuku aromata nke na-ezo aka na ntughari nke testosterone n'ime estrogen. Dika estrogen na-ebili elu, nke a nwere ike ibute gynecomastia (nwoke na-ebuwanye ibu) na ijide mmiri. Mmiri mmiri a na-etinye na mmiri nwere ike ịmetụta ọbara mgbali. Na-enye aka ịlụso mmetụta ndị dị otú ahụ ọgụ, karịsịa gynecomastia, ọtụtụ na-agbanye aka na Modulators Estrogen Receptor Modulators (SERMs) dị ka Tamoxifen Citrate (Nolvadex) na maka nchebe dị njọ Aromatase Inhibitors (AIs) dị ka Anastrozole (Arimidex). Enweghị nsogbu, AIs bụ ndị kasị dị irè; Otú ọ dị, ha pụkwara igosi nsogbu dịka ọ na-abịa cholesterol na ịdọ aka ná ntị.
E wezụga mmetụta ndị a, Testosterone Cypionate nwere ike ịkwalite dihydrotestosterone (DHT) metụtara mmetụta ndị dị ka ihe otutu, ntutu ntutu na prostate enlargement; Otú ọ dị, ọ ga-aga n'amaghị ekwu na ndị na-arịa ọrịa DHT ga-abụ ndị kacha njọ. Na nhazi iji nye nchebe, onye na-eme ihe na-eme ka 5-alpha reductase dị ka Finasteride nwere ike ịba uru dịka ọ bụ onye na-eme ihe na-eme ka androgen DHT na-akpata nsogbu ahụ. Ọ ghaghị ịma; ntutu isi na-ekwe omume na ndị ikom na-ebute na ịcha mma nwoke.
Olee otú iji ọgwụ Testosterone Cypionate si Testosterone Cypionate raw ntụ ntụ?
Nke a bụ ntụziaka dị mfe nke na-eme Testosterone Cypionate (maka amaokwu)
Onye ọ bụla ML nke 200 mg / mL ngwọta nwere:
Osisi owuwu ......................................................................... 560 mg
Ebee ka ịzụta akwa dị ọcha Testosterone Cypionate raw ntụ ntụ online?
Testosterone Cypionate raw ntụ ntụ bụ ihe a na-ahụkarị n'ime ihe ndị dị n'ime steroid ụwa, yana mgbe ọ na-asọmpi Testosterone Enanthate maka mmeri. E kwesịghị inwe nsogbu ịchọta ngwaahịa a na ahịa, ebe ọ bụ ihe a na-ahụkarị ma na-arụkarị ọrụ.
Testosterone Cypionate nwere ike ịzụta site na ntanetị n'ịntanetị, ọnụahịa nwere ike ịdị iche. N'ahịa, ịdị ọcha nke Testosterone Cypionate raw ntụ ntụ dị nnọọ iche, na-esokarị na 60% -99% puirty, enwerekwa otu ọkwa nke ọgwụ, ma ọ bụ nke kachasị mma ọnụahịa dị elu, na-akpata ya nwere ike ịmepụta ngwaahịa ndị ọzọ .Ọ bụrụ na ọ dị ọcha, ọ kwesịrị ịzụta akwa dị ọcha otu.
Tags: ịzụta Testosterone cypionate ntụ ntụ, Testosterone cypionate ntụ ntụ
Testosterone acetate ntụ ntụ: biko anaghị eji ya ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ndị a!
Ebee ka ịzụta Trenbolone Acetate ntụ ntụ?
Testosterone propionate ntụ ntụ: uru na mmetụta ndị ị ga-ama!
Mmekọahụ hormore tadalafil uzuzu: 12 eziokwu banyere mmekọahụ ịzụ ọgwụ ị kwesịrị ịma !!!	raw tadalafil ntụ ntụ na ọgwụgwọ erectile dysfunction (ED)